Mayelana NATHI - Qihong New Material Products Co, Ltd.
Shijiazhuang Qihong New Material Products co., Ltd. ungomunye wabakhiqizi abasebenza ngamagwebu eNyakatho China, owasungulwa ngo-1994, abasebenzi abangaphezu kuka-200 basebenza lapha.
Ngemigqa emihlanu yokukhiqiza amagwebu, sibandakanyeka kakhulu ekukhiqizeni igwebu elixhunyaniswe nge-PE, igwebu le-EVA, igwebu yerabha, kuholela iziqukathi eziyikhulu zokuthumela amagwebu njalo ngenyanga. Ukuze sanelise izidingo zamakhasimende ethu, sitholakala ngezindlela eziningi zokwenza inqubo, njengokusika i-die, i-CNC milling, i-moche laminging, i-Thermo ukwakha, ukunamathela emuva, njll. Ngeminyaka eminingi yalokhu okuhlangenwe nakho, ezinye izixazululo zobungcweti zingaba futhi. kuhlinzekiwe, okufana, i-multilayer laminating, ukwakheka kwengaphezulu, ukusika okukhethekile okwenziwe kanye nokwenza umsebenzi osebenzayo.
Gxila ekukhiqizeni i-LDPE evaliwe-iseli / i-open-cell LDPE ne-EVA, kanye ne-foam yerabha kanye nemikhiqizo ye-foam esetshenzisiwe.
Umthamo: Umkhiqizo ophakeme wegagasi 5000m3/ inyanga.
Umkhiqizo ophansi wegagasi 2000m3/ inyanga.
Ikhwalithi enhle kakhulu nokuklama okuhle.
Ilayisense yokungenisa kanye neyokuthumela kwelinye izwe yatholakala selokhu saqala, futhi manje imikhiqizo yethu yathunyelwa eYurophu, eMelika, e-Australia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda.
Lwela imikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukholo oluhle kanye nensizakalo ecabangelayo, ukufeza izidingo zamakhasimende, ngumgomo wokuthuthukiswa kwale nkampani.
I-OHSAS 18001: 2007
Ubuchwepheshe buqhamuka kuSANWA KAKO CO..LTD eJapan.
Umhambisi we-ZOTEFOAMS wase UK.
Ukubambisana kweminyaka eminingi neChIMENG INDUSTRY eTaiwan.
Amakhasimende Asezingeni eliphezulu: I-Haier, iPanasonic, iSchneider, Iphrojekthi yama-Gorges amathathu, i-Project Divert Amanzi ukusuka eNingizimu kuya eNyakatho, amaphrojekthi esikhumulo sezindiza esikhulu.
Imikhiqizo ethunyelwa emazweni angaphezu kwezi-20 nezifunda, njengeNyakatho Melika, iYurophu, i-Australia, Middle East, iSoutheast Asia, kuthunyelwa kwamanye amazwe ngonyaka Ngaphezu kwe h200 40HC.
Umugqa Wokukhiqiza Nendawo Yokucubungula
Umugqa Wokukhiqiza: imigqa engu-5 enezindonga.
Ukuqhekeka okuvundlile nokuqondile
I-Butt Welding ibe ngosayizi omkhulu amashidi nama-roll
Ukubumba okubandayo / okuBandayo okuBandayo kwe-Thermo